Soomaali ku eedaysan qarax oo maxkamad lagu soo taagay dalka Kenya | Waayaha
You are here: Home 2014 February Soomaali ku eedaysan qarax oo maxkamad lagu soo taagay dalka Kenya
Posted on February 5, 2014 by caano | 0 Comments
Afaratan nin oo shalay lasoo taagay maxkamada Nairobi ayaa lagu eedeeyey inay qorsheenayeen weeraro argagaxin ah oo ka dhaca gudaha dalka Kenya.
Magacyada raggan ayaa kala ah Maxamed Cismaan, Ilyaas Yusuf Warsame, Garaad Xassan Feer iyo Cabdi Maxamud ayaa lagu eedeeyey inay ku lug lahaayeen qarax ka dhacay makhaayad ku taal banaanka Airporka Jomo Kenyatta 16kii bishii hore ee Janaayo.
Waxaa sidoo kale lagu eedeeyey ragan in la helay waxyaalaha qaraxa oo ay raggan wateen, qalabkaasi oo laga helay xarunta ganacsiga ee Shauri Moyo Shopping Centre ee magaalada Nairobi, halkaasi oo laga helay gaari ka baxsaday Airporka kadib qaraxii halkaasi ka dhacay.
Gaarigan ayey rasaas ku fureen ciidamada Booliiska ee Airporka markii uu halkaasi ka baxsanayey, waxaana ku dhintey nin kamid ah raggii gaariga saarnaa oo Soomaali ah, oo meydkiisa gaariga dhexdiisa looga cararay, waxaana gaarigaasi laga helay xarunta Shauri Moyo Shopping Centre subaxnimadii danbe.
Gaarigan ayaa laga dhex helay waxyaalaha qaraxa iyo waliba telefonada Kaararka, waxaana ragga maxkamada hada lasoo saaray isugu jiraan qaar la xariirinayo gaarigaasi Airporka kasoo baxsaday iyo waliba telefonada gaariga laga helay.
Waxaa sidoo kale raggan lagu soo oogay danbi la xariira inay sameysteen waraaqo aqoonsi Kenya oo aan jirin kuwaasi oo laga soo sameeyey deegaanada Isiolo, Wajeer iyo Garissa.
Raggan ayaa gebi ahaan iska fogeeyey danbiyadda lagu soo oogay, waxayna codsadeen in lagu siidaayo damiin, balse xeer illaalinta Kenya ayaa diiday in damiin lasiiyo raggan, waxayna ku dooday xeer illaalinta in raggan ay khatar ku yihiin amniga dalka Kenya.
Maxkamada ayaa go’aan kasoo saari doonto codsiga damiinta 12ka bishan Feberaayo.
Waxaa horey maxkamadeyntooda magaalada Nairobi uga socotay afar nin oo kale oo Soomaali ah oo loo heysto inay gacansiiyeen kooxdii fulisay weerarkii 21kii September ka dhacay xarunta Westgate ee ku taal magaalada Nairobi.